वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघको घोषणा ! - Laltin Media
Home»इकोनोमी»वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघको घोषणा !
वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघको घोषणा !
By लाल्टिन डट कम April 11, 2022 Updated: April 11, 2022 No Comments1 Min Read
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आइतबार ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत फागुनमा मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । चैतमा भने निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । चैतमाजस्तै वैशाखमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
अब वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले चैतकै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने छन् । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको हाल एक वर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११।०३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । गत माघको तुलनामा फागुनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका थिए ।
फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम गरेका थिए । सहमति अनुसार बैंकहरुले सोही ब्याजदर प्रकाशित गर्ने भएकाले वैशाख महिनाका लागि पनि निक्षेपकर्ताले उल्लेखित ब्याजदर नै पाउने छन् ।
#वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने बैंकर्स संघको घोषणा !